विश्वका धनी क्लबको सूची सार्वजनिक, बार्सिलोना, युभेन्टस र रियलको स्थान कहाँ ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलविश्वका धनी क्लबको सूची सार्वजनिक, बार्सिलोना, युभेन्टस र रियलको स्थान कहाँ ?
एजेन्सी, १५ पुस । विश्वको सबैधन्दा धनी क्लबहरूको सूची सार्वजनिक भएको छ । अस्ट्रेलियाको खेल व्यवस्थापन कम्पनी ‘ग्लोबल स्पोर्ट्स’ ले हालै एक धनी क्लबहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
ग्लोबल स्पोर्ट्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार स्पेनिस च्याम्पियन क्लब बार्सिलोना सबैभन्दा धनी क्लब बन्न सफल भएको छ । गत सिजनको ला लिगा च्याम्पियन क्लब बार्सिलोनाले शीर्ष स्थान बनाएको हो । बार्सिलोनाको खेलाडीहरूको औसत वार्षिक तलब १ सय ४७ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ ।
यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तथ्यांकमा बार्सिलोनाका खेलाडीको औसत तलब १ सय ५६ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको थियो । यस सूचीको दोस्रो स्थानमा रियल मड्रिड छ । रियलको खेलाडीको वार्षिक तलब १ सय ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
तेस्रो स्थानमा इटालियन क्लब युभेन्टस छ । उसका खेलाडीको वार्षिक तलब १ सय २० करोड रुपैयाँ छ । युभेन्टस २ वर्षमै धनी क्लबको तेस्रो स्थानमा आइपुगेको हो । पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस आएपछि ऊ यस सूची आउन सफल भएको हो ।
यस्तै चौथो स्थानमा बास्केटबल क्लब पोर्टल्याण्ड ट्रेल ब्लेजर छ । यस क्लबका खेलाडीको औसत तलब १ सय १८ करोड रुपैयाँ छ ।